Tsika inflatables Mugadziri Anokanganisa Matende, Stunt Airbag, inflatable Mvura Ipaki Inotengeswa | Mufaro Unodzikisirwa
Mafekitari nyanzvi tsika inflatable matende uye inflatable mvura paki- Joy Kufararira.
Inflatable mvura paki
Inflatable igloo tende
Inflatable highte hombe tende
Intlatable yekushambadzira tende
Intlatable yekurapa tende
Inflatable bubble tende
Inflatable stunt airbag
Inflatable cube tende
0.9mm PVC tarpaulin yakavharwa vinyl
30 ° 30 m Kurema: 1500kg
JOY inyanzvi yekugadzira iyo inflatable mvura paki, inflatable matende uye stunt airbag kubvira 2001.
Zvigadzirwa zvikuru zvinosanganisira kuputika kwemvura slide, inoyerera mvura paki, kuputira tende, inflatable mitambo, stunt airbag, inflatable kushambadzira, nezvimwe.
PVC Outdoor Dome Camping Camping Bubble Hotel inflatable yakajeka Crystal Tende yekutengesa
PVC Mhepo Kunze Kwekunze Dome Camping Tree Luxury Hotera Hotera Yakajeka Crystal Crystal Crystal Tende Kutengesa. Bvisa bubble tende nyanzvi yekugadzira inoburitsa yepamusoro mhando inclatable yakajeka tende. Tende rakajeka reBubble rine tende rakawanda kunge misasa yemisasa, Hotera, zviitiko zvebato. Tinogona kutsika-tsika camping camping tende pane dzakasiyana saizi, gamuchirwa kuti tibate isu, tlatable bubble matende kutengeswa.
Intlatable Airthight bubble dome yakajeka tende kune kunze kwekunze camping musasa
Inflatable Airthight bubble dome tende yekunze yakadzika musasa. Joy inflatable inoburitsa marudzi ese ehurongwa hwemagetsi kune vatengi pasi rese. Kana iwe uchitsvaga matende akajeka emisasa, unzwe wakasununguka kuti ubate isu, matende emabhuruku ebhuruku kutengeswa.
Inflatable yakajeka spherical dome bubble kabheji ballon tende yekukanda
Inclable yakajeka spherical dome bubbble tende yekutenderwa kwekunze musasa. Joy in inclatable bubble makabati anotengeswa zvakanyanya mumisika yenyika uye yakakurumbira nevatengi vazhinji. Iyo ine mashandisiro azvino, senge seboka re ballon kuti musasa musasa, tende rinobhururuka tende, etc..
Snowboard Airbag Landing Pad yekuchengetedza Air Bag kusvetuka
Snowboard Airbag Lageing Pad yekuchengetedza Air Bag kusvetuka + HTTPS: //WWWWFLALACL.COM
Kuronga: Ziva zvinodiwa zvevatengi uye zvinoshungurudza; Simbisai chimiro, ruvara, saizi, basa rezvigadzirwa uye bhajeti revatengi; Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi uye zvinonetsa, kurukurai kutungamira kwekutungamira kana dhizaini.
Kugadzirisa: Ita iyo 3 D dhizaini inoenderana nezvinodiwa nemutengi; Sarudza mhinduro uye kugadzirisa; Gadzira odhi yekurodha ine yakakosha pepa pane mhinduro.
Kugadzira: Zvinoenderana neakagadziriswa dhizaini yekudhirowa iyo dhizaini uye inogadzira; Tevera kumusoro kwegadziriro yekugadzira uye tora zvinoenderana mavhidhiyo evatengi anosimbisa; Edza chigadzirwa uye tora vhidhiyo panguva yekuedzwa.
Mushure mekutengesa / Mhinduro: Tumira vhidhiyo inoenderana uye taurirana nevatengi; Kusvitswa; Bhadhara yekudzoka kushanyira mamiriro ekushandiswa.
Mavhidhiyo ese aya akapfurwa patinoedza zvigadzirwa zvine inflat ne timu yedu yekupfura, kana mhinduro yevatengi nekupfurwa kubva pachiitiko ichi. Kunyanya inoratidza chimiro, chimiro, mashandiro, ruvara uye kushandiswa kwezvigadzirwa zvedu. Izvi zvinoita kuti isu tivandudzike ....
Guangzhou Joy Inflatable Limited iri fekitori iyo inonyanya kuve yakapararira mvura paki paki, inflatable matende uye stunt airbag. Tinogona kukupa iwe yakagadziriswa mhinduro kune yako nzvimbo. Ichi chinogona kuve chakasarudzika chechigadzirwa chinokodzera iwe chaiwo parameter, bhajeti uye zviyero. Neruzivo rwedu kubva pamakore gumi apfuura munyika makumi mashanu, tinoziva izvo setups zvine musoro maererano nekunakidzwa uye kushanda.
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya muminda yevaraidzo, kuratidzira, kushambadzira, kunetseka kwekupedzisira kwekushandiswa kwemukati uye kwekunze, uye mapaki emvura nezvimwewo, varaidzo / mafaro / mutambo / nzvimbo dzekushanyira nzvimbo uye zvichingodaro. Isu tinoziva, munzira yekumberi, kune mikana nematambudziko, kukwikwidza uye nekudyidzana. Asi isu tinotenda kuti ruzivo rutsva nematekinoroji aya anoita basa rakakosha munzira yekuenderera mberi nekusimudzira nekusimudzira,
isu tinove nechokwadi chekuti isu tinokwanisa kupa vanokwanisa uye vakanakisa inflatable zvigadzirwa, zvichibva pane vashandi vedu vane ruzivo, michina yepamusoro uye yakasimba quality management system.
Bata Isu Tora Iyo YeMahara Design
Yainyanya kugadzirwa mumatende ane inflatable uye inoyerera yemvura paki inoenderana. Isu tinopa dzakasiyana siyana sengevara, saizi, dhizaini, dhizaini yekuita, basa rekushongedza, kudhinda, etc. NeSGS, CE, UL uye humwe chitupa chehunyanzvi hwekugadzira zvinhu uye zvigadzirwa.